Updated: 2021-07-09 16:32
Dhaqanka iyo wakhtiga firaaqada + –
Marka ay tahay xagaaga, dad badan ayaa banaanka u baxaa. Sannadkan, sidoo kale, waa muhiim in la sii wado ka fogaanshaheena si loo yareeyo faafitaanka cudurka. Taasina waa sababta ay magaalada Malmö calaamado ugu dhigtay jardiinooyinka iyo afaafka hore ee meelaha lagu maydho taas oo ina wada xusuusinaysa inaan iska fogaanno.
Xilliga kuleylaha, barkadaha dabaasha ee bannaanka, Rosengårdsbadet, Segevångsbadet iyo Lindängsbadet, waxay u furnaan doonaan dadweynaha, iyada oo xaddidan. Xayiraadahani waxay xaddidayaan ugu badnaan tirada booqdayaasha goob kasta oo lagu maydho oo lagu aasaasay si waafaqsan Sharciga Faafitaanka.
Meelaha lagu maydho gudaha magaalada Malmö wali way ka xidhan yihiin dadweynaha.
Matxafyada Malmö, Matxafka Farshaxanka ee Malmö, maktabadaha ku yaal Malmö, Arkiifs-ka Malmö, Naturum Öresund iyo Arena 305 waxay ku sii furnaanayaan xayiraad.
Taageerada la siinaayo dadka dhibanayasha rabshada + –
Dugsiyada xannaanada ee magaalada Malmö + –
Dugsiga barbaarinta iyo iskuulada dhexe wali way sii furnaanayaan, marka loo eego warbixinnada hay’adaha (Maamulka Caafimaadka Dadweynaha). Carruurtu waxay yeeshaan astaamo sahlan, haddii xataa ay leeyihiin xaalad caadi ahaan ka mid dhigi karta kooxda halista ku jirta. Macluumaadka loogu talagalay waalidiinta leh carruurta dhigata dugsiga barbaarinta (pdf, 66.1 kB)
Carruurta aan gaarin dugsiga barbaarinta ee qoysaska laga helo covid-19 waxaa lagula talinayaa in ay guriga joogaan, xitaa haddii aysan astaamo lahayn.
Iskuulada iyo iskuulada barbaarinta + –
Ardayda ku jirta qoysaska laga helo covid-19 waxaa lagula talinayaa inay guriga joogaan, xitaa haddii aysan astaamo lahayn.
Dugsiga sare + –
Dugsiga sare dhexdiisa, waxaa si tartiib tartiib ah loogu laaban doonaa waxbarid dheeraad ah goobta laga bilaabo Ogosto. Bilowga ereygan deyrta, sharciga ugu weyn ayaa ah in lagu bixiyo barida goobta dugsiga.
Dugsiga sare iyo waxbarashada dadka waa weeyn waxay siiyaan maaskiga afka dhamaan ardayda iyo macalimiinta. Isticmaalka ilaalada maaskiga afka waa ikhtiyaari.
SFI iyo Komvux (Waxbarashada dadka waaweyn ee degmada) + –
Waxbarashada dadka waaweyn, waxaa si tartiib tartiib ah ugu laabanaysa waxbaris badan goobta. Bilowga ereygan deyrta, sharciga ugu weyn ayaa ah in lagu bixiyo barida goobta dugsiga.
Sidoo kale SFI-ga iyo dadka waaweyn ee xirfadlayaasha ah, waxaa si tartiib tartiib ah ugu laaban doonan waxbaris badan goobta laga bilaabo Ogosto.
Lärvux waxay qorsheyneysaa inay ka bilowdo goobta dugsiga.
Dugsiga xagaaga waxaa lagu qabtaa qaab dijitaal ah.
Tirada tijaabooyinka Komvux waa la kordhin doonaa deyrta. Tan macnaheedu waxa weeye fursadaha loo kordhiyay ardayda dugsiga sare si loo hagaajiyo darajooyinkooda. Dawladdu waxay sidoo kale go'aansatay in ardayda dhamaystay waxbarashadooda dugsiga sare sannadka 2020 ama 2021 la siiyo khidmada imtixaanka oo hooseeya.
Magaalada Malmö ayaa si kumeelgaar ah u beddeleysa xeerka fasaxyada waxbarashada sababo la xiriira maqnaansho/firfircooni la'aan aan fasax laga qaadan. Haddii aad wax ku baraneyso waxbarashada dadka waaweyn, uma baahnid inaad soo gudbiso caddeyn caafimaad illaa maalinta 15.
Xadka loogu tala galay marka maqnaanshaha aan fasax laga qaadan uu natiijo ahaan noqon karo dhameystir la'aan ayaa sidoo kale laga bedelayaa afar ilaa seddex isbuuc. Sharciga cusub ayaa sidoo kale khuseeya haddii aad wax ku baraneyso waxbarasho ay bixiso Komvux Malmö iyada oo loo marayo bixiyeyaasha waxbarashada ee madaxa bannaan.
Maaskarooyin ayaa la siiyaa dhammaan kaqeybgalayaasha waxbarashada dadka waaweyn. Isticmaalka maaskarada waa ikhtiyaari waxayna khuseeysaa shaqsiga inuu go’aansado haddii uu doonayo inuu sidaas sameeyo. Waa muhiim in la ixtiraamo go’aanka midba midka kale. Sidoo kale waa muhiim in kuwa isticmaalaya maaskarada ay si sax ah u isticmaalaan. Isticmaalka khaldan wuxuu u horseedi karaa halista sii kordheysa ee faafitaanka cudurka.
SFI da ayaa qeybo ka mida ah waxbarashda lagu dhigan doonaa masaafad fog si looga hortago khatarta faafitaanka fayruska. Waxa weli suurtogal ah in la iska diiwaangeliyo dhijitaal ahaan iyo telefoon ahaan. Booqashooyin horay loo sii qabsaday ayaa la sameyn doonaa. Miyaad su'aalo ku sabsan SFI da iyo is diiwaangalinta qabtaa? Nala soo xiriir anaga. Telefoonka: 040-343335ama emayl ahaan sfi.komvux@malmo.se
Guryaha hawlgabka, makhaayadaha, meelaha ay ku kulmaan waayeelka iyo LSS + –
Dhammaan guryaha daryeelka waa u furan yihiin booqashooyinka, laakiin waxaad u baahan tahay inaad wacdo hoyga ka hor intaadan imaan. Albaabka laga galo hoyga waxaa ku yaal xarun leh macluumaad iyo sharciyo ku saabsan waxa khuseeya booqashada.
Hawlaha maalmeed ee Malmö waa furan yihiin, laakiin saacadaha furitaanka ayaa si ku meelgaar ah loogu beddelay nus maalmood halkii laga isticmaali lahaa maalmo
Laga bilaabo 17ka Maajo, meelaha lagu kulmo waayeelka waxay u furan yihiin waxqabadyada banaanka. Waxaad ubaahantahay inaad horey ugusii diiwaangeliso telefoonka goobta kulanka aad rabto inaad booqato. Waad iska qori kartaa hal hawl usbuucii.
Nambarada telefoonka ee meelaha lagu kulmayo:
Goobta kulanka Dammfri 0721-87 83 50
Goobta kulanka Havsuttern 0708-52 29 58
Goobta lagu kulmayo Ignis 0738-62 98 98 Info oo ku qoran af Finnish 040-34 40 56
Goobta kulanka Lekatten 0721-81 05 84
Goobta kulanka Lyckan 0738-62 09 19
Goobta kulanka Tuppen 040-34 39 90
Goobta kulanka Barta kulanka 040-34 73 40
Goobta kulanka Senior 040-34 52 26
Goobta kulanka Limhamn Mathildenborg 040-345066
Gacmahaaga dhaq oo gurigaaga ka joog haddii aad leedahay astaamo. Wadajir ayaan is daryeeli karnaa!
Makhaayadaha waayeelka Mathildenborg, Dammfrigården, Tuppen iyo Lekatten waxay u furan yihiin martida fadhida. Si sidaa loo yeelo sida ugu nabadgalyada iyo xasiloonida badan ee suurtogalka ah, xaddidaadaha qaarkood ayaa la adeegsadaa:
Martida fadhida waxaa loo ogol yahay kaliya inta lagu jiro adeega qadada (maalmaha fasaxa ah ee Mathildenborg kaliya cuntada waxaa loo iibiyaa soo qaadis)
Tirada kuraasta ayaa xadidan si ay uhesho masaafad ku filan oo udhaxeysa martida.
Dhammaan adeegyadu waxay ka dhici doonaan miiska.
Weli waa suurtagal in laga iibsado cunnooyinka soo qaadista makhaayadaha iyo meelaha lagu kulmo ee Ignis iyo Havsuttern.
Hubinta maqaayadaha iyo meheradaha qaxwaha + –
Raadiyaha Sweden - Xaaladda fayruska corona ee dalka Sweden
Adigu ilaali naftaada, dadka kalena ka ilaali in cudurku ku faafo
Senast ändrad: 2021-07-09 16:32